စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် ဆေးကုသမှုမှာ ဈေးကြီးသော်ငြားလည်း…..
သင့်မှာသာ အာမခံရှိမယ်ဆိုလျှင် ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ အောက်ပါတို့ကို သင့်အာမခံမှ အကုန်အကျခံပေးနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား??? ၁) အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊ အစာအိမ်မှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း ၂) ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း ၃) အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် ပြင်ပလူနာအဖြစ် ကုသမှုခံယူခြင်း ၄) ရင်သားဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်း ၅) ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း ၆) အဖိုးအဖွားများနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ – ရေတိမ်ခွဲခြင်း၊ တင်ပဆုံရိုး အစားထိုးခြင်း ၇) သွားဘက်ဆိုင်ရာ ရောဂါများ ကုသခြင်း
ဒါပေမယ့် နဂိုရှိပြီးသား ရောဂါတွေအတွက်ကတော့ အာမခံမှတဆင့် အကုန်အကျခံပေးခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် သင်က ငယ်ရွယ်ပြီးကျန်းမာသေးတယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် သင့်ကလေးအား မိသားစုမျိုးရိုးရောဂါမှ ကာကွယ်လိုတယ်ဆိုရင်…. အခုက အာမခံဝယ်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ အာမခံထားဖို့ ပိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာရခြင်းမှာ အောက်ပါ အကြောင်းအရင်း သုံးခုကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁) ဆေးကုသရာတွင် မြင့်မားသော ကုန်ကျစရိတ်အတွက် စိုးရိမ်ထိတ်လန့်စရာမလိုတော့ပါ
ရောဂါမကုသမီ ကြိုတင်၍ ကုန်ကျစရိတ်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ထားသော်လည်း နောက်ဆုံးထွက်လာသော ငွေကြေးပမာဏက သင့်ကိုအံ့သြစေမှာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဧည့်သည်တော်တော်များများက စင်ကာပူနိုင်ငံကို ကျန်းမာရေးအလိုအပ်ချက်အရ အမြဲတစေလာရောက်လေ့ရှိတာကြောင့် သူတို့ကိုယ်တိုင်နှင့် ကလေးများအတွက် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲမှ ကာကွယ်နိုင်ရန် သူတို့ဟာ အာမခံထားခြင်းကို ပြုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းများကတော့ အာမခံထားခြင်းဟာ ငွေကြေးကုန်ကျနိုင်ပါတယ်… ဒါပေမယ့် အပြင်းအထန်နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကုန်ကျမှုနဲ့စာရင် ဒါဟာမပြောပလောက်ပါဘူး။ အာမခံသာရှိမယ်ဆိုရင် သင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက် ပိုမိုကုန်ကျသွားမယ်ဆိုရင်တောင် ကိစ္စမရှိတော့ပါဘူး ဘဝမှာ တခြားအရေးကြီးတဲ့အရာတွေ အပေါ်မှာ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ပိုပြီး အာရုံစိုက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်
၂) သင့်မှာ နဂိုရောဂါအခံရှိပြီးလျှင်တောင်မှ အာမခံထားလို့ရပါတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ငယ်ရွယ်သော ဧည့်သည်တချို့မှာ မိသားစုမျိုးရိုးရောဂါ ( ဥပမာ ရင်သားကင်ဆာ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ဆီးချိုသွေးချိုရောဂါ ) ကြောင့် အနာဂတ်မှာ ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်တွေ ရှိလာနိုင်တာကြောင့် သူတို့တွေဟာ အမြော်အမြင်ရှိစွာနဲ့ အာမခံထားပြီး ငွေကြေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားလေ့ရှိပါတယ်။ ထို့ပြင်နဂိုရောဂါအခံ ရှိပြီးသားသူများကပင် အာမခံ(အဆင့်မြင့်) ထားကြပါတယ်။ သူတို့တွေ ကိုယ်တိုင်က ကုသမှုအတွက် ကြီးမားသောကုန်ကျစရိတ်ကို ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာကြောင့် သူတို့သားသမီးတွေအတွက် အာမခံဝယ်ပေးကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်
၃) သင်ထင်ထားသည်ထက် ပိုမိုသက်သာပါတယ်။
၂၈နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ်ယူပါက တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ (ကိုယ်ဝန်ဆောင် အာမခံပါဝင်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၂၀၀)
၄၂နှစ်အရွယ် စုံတွဲ နှင့်ကလေးနှစ်ယောက်အတွက်မိသားစု ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ်ယူပါက တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ( ပြင်ပလူနာ အာမခံပါဝင်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၀၀၀ )
၅၅နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ်ယူပါက တစ်နှစ်လျှင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ သာကျသင့်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ( ပြင်ပလူနာ အာမခံပါဝင်ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၈၃၀၀ )
အသေးစိတ်ကို အခမဲ့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်
Ulink မှ ဘယ်လိုကူညီပေးနိုင်ပါသလဲ။
ကျွန်ပ်တို့သည် အာမခံကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ အလွန်ပင်အတွေ့အကြုံရှိသော အာမခံကုမ္ပဏီများ ( Bupa, InterGlobal, Aviva, Tenet ) နှင့် စီးပွားဖက်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ ကျွန်ပ်တို့၏ ဧည့်သည်များအတွက် အသင့်တော်ဆုံး အာမခံဝယ်ယူမှု နှင့် အသက်သာဆုံးနှုန်ထားများ ရရှိစေရန် အစွမ်းကုန်ကူညီပေးလျက်ရှိပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန် : enquiry@ulinkmyanmar.com ဖုန်း – ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၂၂ / ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၁၁